Sei Kuwedzera Yako Nhare Shanduko uye Inotungamira | Martech Zone
Sei Kuwedzera Yako Nhare Shanduko uye Inotungamira
China, December 15, 2016 Chishanu, February 10, 2017 Adam Mudiki
Heano mamwe mabasa epamba iwe usati waverenga izvi.
Ndezvipi zvako muzana yekutendeuka izvo zvinoitika kuburikidza nefoni uye desktop? MuGoogle Analytics, sarudza Shanduko> Zvinangwa> Shanduko uye sarudza Mobile Traffic yeboka rako rekutanga uye Isiri-Nhare Traffic kune wechipiri wako:
Ndezvipi zvako chikamu chemotokari izvo zvinoitika kuburikidza nefoni uye desktop? MuGoogle Analytics, sarudza Vateereri> Ongororo uye sarudza Mobile Traffic yeboka rako rekutanga uye Isiri-Nhare Traffic kune wechipiri wako:
Muenzaniso wandiri kupa pamusoro ndeweB2B mutengi, saka pane imwe tsananguro yemusiyano uripo pakati pezviviri. Ndine chokwadi chekuti B2B vanoita zvisarudzo vangangodaro vachizoshandura nemupi uyu kuburikidza nedesktop. Iko kusarongeka - kana kuriko - kunonyanya kunoenderana nevatengi vako. Nharembozha ingangosaririra kuseri kwedesktop, kunyangwe kubhurawuza nhare uye kutenga kuri kuwedzera kuita nzvimbo. Kunyangwe zvakadaro, maererano ne2015 Google ripoti, iko zvino kune kwakawanda kutsvagurudza kuri kuitika parunhare kupfuura pakombuta… saka mukana uripo.
Maitiro ekukwiridzira nhare yako yekutengesa nhare yakatosiyana nekuita kwako dzimwe nzira. Iyo nhare yekutengesa ruzivo inofanira kuve yakanyanyisa kushanda uye inonzwisisika padanho rega. Nehurombo, mabhizinesi mazhinji haashande pamwe chete nzira yekutengesa nhare Izvo zvakakosha kune rako bhizinesi kuti unzwisise izvo zvinoita kuti nharembozha itarike zvakasiyana kuti iwe ugone kugadzira chirongwa uye zano iro rinobudirira.
Iwe ungangoda kutarisa chiyero uye woita rimwe basa neako saiti kuti uve nechokwadi chekuti iwe unogona kuburitsa chero nyaya uye kuvhara mukaha pakati pezviviri. Izvi infographic kubva kuSalesforce inonongedza nzira nhanhatu dzaunogona kusimudzira huwandu hwevatengesi vekutengesa nhare.
Yako Saiti Inofanirwa kuve Nhare-Inoshamwaridzika - dhizaini yako inofanirwa kuve inoteerera kune akasiyana saizi saizi, zvemukati zvinofanirwa kuve nyore kuverenga, yako yekufona-kune-zviito uye mabhatani anofanirwa kuve nyore kubaya, uye iwe unofanirwa kunge uine mabhatani-eku-kufona mabhatani.
Mhanya Nhare dzeShambadziro paSocial Media - vako vanoita zvisarudzo uye avo vanokonzeresa kutenga sarudzo vari pama mobile mobile application zuva rese. Zvemagariro kushambadzira kuburikidza nharembozha paTwitter, Facebook, uye LinkedIn vane mikana mikuru yekunangisa.
Natsiridza Nharembozha Peji Rekutakura Nguva - maererano ne KISSMetrics, 47% yevatengi vanotarisira kuti peji rewebhu riite mumasekondi maviri kana mashoma uye makumi mana muzana yevanhu vanosiya webhusaiti iyo inotora anopfuura masekondi matatu kurodha Kunonoka kwechipiri-chechipiri kupindura peji kunogona kukonzera kuderedzwa kwe40% mukutendeuka.
A / B Edza Yako Nhare Yekumhara Peji - edza marongero ako, misoro yako yemusoro, zvemukati, uye yako yekufona-kune-chiito kuti uone kuti ndeapi magadzirirwo anoburitsa yakanyanya kutendeuka mwero.
Gadzira Mutengi-Akatarisana neGoogle Bhizinesi Rangu Peji Yemunharaunda - vatengi vakawanda uye mabhizinesi vari kushandisa mepu kutsvaga vanopa zvakavakomberedza. Iva nechokwadi chako Google Bhizinesi Yangu peji rave parizvino uye urikushandisa zvese zvingasarudzwa ipapo, kusanganisira mifananidzo.
Gadzirisa Yako Yekutendeuka Nzira - deredza huwandu hwematanho ekushandura mushanyi kumutungamiriri, ita shuwa kuti nzira yekutenga iri nyore uye yakajeka. Uye zvechokwadi, shandisa kutsvagazve kushambadzira uye hukuru zvipo kupa vashanyi vako kuti vatendeuke.
Heano infographic, Maitiro Ekunyanyisa Kuvandudza Nhare dzekutengesa:
Tags: ab testnzira yekutendeukamwero wekushandurwazvinangwagoogle bhizinesi rangusei kutimaitiro ekuwedzera ekutengesa anotungamiranharembozhanhare yekushandura nharemobile friendlymobile inotungamiranhare yekutengesa inotungamiranharembozhanharembozha kushambadziramobile kuyedzwanharembozhamobile maringe nedesktopnhare vs desktopisiri mobile traffickutengesa kunotungamirapasocial mobile
Waze Yemunharaunda: Rega Vatyairi veWaze Vanoona Bhizinesi Rako Kana Vari Around
Maitiro Ekudzorera Bhizinesi Rako Pasina Kurasika Traffic